Totankamôna: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Totankamôna: Fahasamihafan'ny versiona
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Jolay 2020 à 15:12
1 605 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Febroary 2015 à 01:14 (hanova)
k (pejy vaovao, lehibe noho ny teo aloha)
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Jolay 2020 à 15:12 (hanova) (esory)
I '''Totankamôna''' dia [[Faraôna|faraôn]]’i Ejipta tamin’ny taona 1333 hatramin’ny 1323 tal. J.K. nandritra ny Empira Vaovao. Teraka tamin’ny taona 1340 ary maty tamin’ny taona 1322 izy. Mety zanak’i [[Amenôfisy III]] sy rahalahy tsy iray reny tamin’i [[Akenatôna]] ilay nitondra ny anarana hoe Totankatôna ("sary velon’i Atôna") izay nanambady an’i Anksenpatôna (niova anarana hoe Ankesenamôna taty aoriana), zanaka vavy fahatelon’i Akenatôna tamin’i [[Nefertity]]. Tamin’ny fahasivy taonany izy dia nandimby ny rafozan-dahiny teo amin’ny fanapahana an’i Ejipta.
'''Tutankhamun''' dia mizaka ny zom-pirenen'i [[Ejipta]] teraka ny 1 Janoary -1340 ary maty ny 1 Janoary -1322
Nisy akony teo amin’ny fisainany ny fanabeazana azony tamin’i Ay mpitaiza azy sy ny traikefa azony tamin’ilay mpitari-tafika atao hoe Hôremheba, izay samy mpivavaka mahafatra-po tamin’ny [[andriamanitra]] [[Amôna-Ra]] (na [[Amôna-Re]]), ka novany ho Totankamôna ("sary velon’i Amôna") ny anarany sady naveriny indray ny fivavahana amin’andrimanitra maro ([[politeisma]]) izay nofoanan’ny faraôna teo alohany, ka nasongadiny indrindra ny fivavahana tamin’i [[Amôna (andriamanitra)|Amôna]]. Nandritra ny fanapahany dia nandry fahalemana i Ejipta, nafindrany tany [[Tebesy]] (na Teba) ny toeram-ponenany ka navelany i [[Aketatôna]], ilay renivohitra naorin’i Akenatôna.
Tamin’ny taona 1323 tal. J.K., izany hoe sivy taona najakana izy, dia maty i Totankamôna, angamba nisy namono. Tsy nahatratra roapolo taona izy tamin’izay. Nalevina araka ny fomba fandevenana faraôna izy. Tsy nisy mpandova izy ka nanambady ny vady navelany i Ay sady nandimby azy teo amin’ny fitondrana mandritra ny efa-taona, alohan’ny hanapahan’i Hôremheba, ka izany no namarana ny dinastia faha-18.
==Ny fiainany manokana==
I Akhenaten no rainy. Ny vadiny dia Ankhesenamun.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/993947"